Isku-darka isku-darka Glutaraldehyde
Isku-darka isku-darka Glutaraldehyde iyo Deciquan Halabuurka: Per ml wuxuu ka kooban yahay: Glutaraldehyde 50mg Deciquan xalka 50mg Muuqaal: Midab la'aan ama suuxsan oo dareere ah oo dareere cad ah: Tani waa jeermis-dilis iyo daawo antiiseptik. U isticmaalidda dawada jeermiska jeermiska. Ficil Farmashiyeed: Glutaraldehyde waa firfircoonaan balaadhan, tayo sare leh oo jeermis dila. Iyada oo leh faa'iidooyinka ku dayashada iyo daloolada hooseeya, sunta yar iyo aaminka, xasilloonida xalka aqueous, waxaa loo yaqaanaa jeermis-ka-habboon ee habboon ...
Isku-darka aalkolada leh ee Khamriga ah ee Oral
Aalkolada cabitaanka khamriga ee isku-darka ah (dareeraha afka ee Maxingshigan) Waxyaabaha ay ka kooban yihiin: Ephedra, almonds Bitter, Gypsum, licorice. Tilmaamaha: Ka saarida kuleylka sambabka, baabi'inta xaalufinta iyo yareynta neefta, waxaana badanaa loo isticmaalaa kuleylka gudaha, qufaca iyo neefta oo ay keento dabaysha qallalan. Waxay u isticmaashaa ka hortagga iyo daaweynta cudurka neef-mareenka ee ay sababaan caabuqa fayraska, tusaale ahaan cudurrada boronkiitada ee faafa, hargabka faafa ee laryngotracheitis iyo hargab khafiif ah iwm.
Cirbadaha 'astragalus polysaccharoses cirbad'
Astaangalus Polysaccharide Cirbadaha Character: dareere bunni huruud ah, harta waxaa lagu abuuri karaa kaydinta waqti dheer ama qaboojinta kadib. Tusmooyinka: Astragalus Polysaccharide Tilmaamaha: Waxsoosaarkan ayaa ku kicin kara jirka inuu soosaaro interferon, habeeyo unugyada difaaca jirka, iyo kobcinta sameynta unugyada difaaca jirka, waxaa loo isticmaalaa cudurada fayruuska ee digaagga sida cudurada burooyinka faafa. Isticmaalka iyo qaadashada: Loogu talagalay cirbadda xididdada gudaha ama isku-dura Hal cabir oo keliya, 2ml halkii kiiloog kilo w ...